PressReader - Isolezwe lesiXhosa: 2018-09-20 - Kwenzeka ntoni ebomini bakho namhlanje?
Isolezwe lesiXhosa - 2018-09-20 - IZIMVO -
Kuza kumele ukhangele indlela entsha onokubukeka ngayo, kwaye uyicingisise ukuba ngumbono omhle na, kwaye wexesha elingakanani. Ohlobene naye uza kukunika indlebe yakhe ngolu suku.
Olu asilosuku lokuba ube livila, musa ukudlala, kungenjalo impumelelo iyakunikwa omnye umntu. Zikhuthaze, kwaye ukhuthazeke nayimpumelelo yalowo uhlobene naye, kuba impumelelo ikulindile.
Luninzi utshintsho ekumele ulwenze ebomini bakho, kanye ngoku usazimisele ukufikelela kumaphupha akho. Hlonipha imvakalelo yabo bakungqongileyo.
Uziva ukrelekrele ngolu suku, kwaye ungoyiki ukukubonakalisa oko. Uza kothusa abaninzi ngolwazi onalo nongalubabaziyo. Uze ke ungazivumeli ukuba uzithembe kakhulu, kwaye hlala uthe qwa xa ubuzwa imibuzo.
Ukunyaniseka esiqwini sakho namhlanje ingangunobangela wokuba utsale umdla wophetheyo, noza kukutyibela ngezincomo. Uze ungalulibali usapho lwakho ngale mini yanamhlanje.
Ubuthongo bukunqabele, kwaye nempilo ayintlanga ncam, konke oku kubangelwa kukungazithembi kwakho. Musa ukukhangela uncedo ekuphenduleni umbuzo, wuphendule wena siqu.
Wonke umntu ubonakala ekudinga namhlanje, kwaye kuza kumele ukhokele kwiqela okulo. Oku kuza kubangela ukuba uzive udiniwe, khangela indawo ethe cwaka, umamele umculo onokukwenza uzive uphumle.
Qaphela namhlanje ingakumbi endlini, impilo yakho ingangabi sesichengeni, kodwa ibezizinto zasendlini ezisesichengeni. Xa kukho okwenzekayo ebomini bakho, kubakho into ebilahlekile nobunonxibelelwano olukhulu nayo. Usuku lwanamhlanje aluzuhamba ngokwezicwangciso zakho. Xa uzimisele ukutshintsha izicwangciso uza kufumana impumelelo ngokukhawuleza kunokuba ubucwangcisile.
Unovalo namhlanje, nelubangelwa luloyiko lweenkcukacha ezinokuvela. Oku kungadala iingxaki emsebenzini wakho okanye ingozi emtshatweni wakho. Kuza kumele usebenzise amandla angummangaliso.
Ukuba kudala ujonge iphupha elithile, namhlanje liyeke lihambe, awulidingi. Tshintshela kwiphupha onokukwazi ukulifezekisa nokuba ukweyiphi na imeko. Olu lusuku oluhle lokuba ubheke ngasevenkileni yeempahla, ubenotshintsho kwindlela onxiba ngayo.
Namhlanje uvutha bhe! Ufana nqwa nomnatha onamandla ingakumbi kwabo besini esahlukileyo kwesakho. Uza kufumana impumelelo kwicala lezemali nasemsebenzini, kwaye oku kuza kukonwabisa.